सुनसरीको कोशी टप्पु वन्यजन्तु आरक्षमा कसरी मरे यति धेरै चौपाया ? - Purbeli News
सुनसरीको कोशी टप्पु वन्यजन्तु आरक्षमा कसरी मरे यति धेरै चौपाया ?
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, साउन २४, २०७६ समय: ५:५९:१४
सुनसरी । सुनसरीको कोशी टप्पु बन्यजन्तु आरक्षको घाँसे जंगलमा एकसाथ ४४ चौपाया मरेपछि यति धेरै चौपाया कसरी मे भन्ने बिषयमा खोजी शुरु भएको छ ।
चौपाया मर्नुको कारण पत्ता लगाउन रगतको नमूना संकलन गरिएको छ । बराहक्षेत्र नगरपालिका ६ र ९ को बीचमा पर्ने आरक्षको जंगल क्षेत्रमा २८ गाई र १६ गोरु मरेका भेटिएपछि आरक्ष सहित पशु प्राविधिकको टोलीले रगतको नमूना संकलन गरेको छ । चरिचरण क्षेत्रमा एकसाथ ठूलो संख्यामा गाईवस्तु मरेको भेटिएपछि सुनसरी प्रहरीसहित पशु चिकित्सकको टोली घटनास्थल पुगेको थियो ।
पशु प्राविधिक रविन्द्र कोइरालाका अनुसार मरेका चौपाया गणना र खोजी गर्दै मरेका भेटिएका चौपायाको रगत नमूना संकलन गरी बिराटनगरस्थित ल्याबमा पठाउने तयारी गरिएको छ । चिकित्सक सहितको उपस्थितिमा नमूना संकलन र मरेका चौपायाको अवस्था हेर्दा एन्थ्रेक्स नामक रोग भएको हुन सक्ने आशंका गरिएको छ । मरेका केही गाइवस्तुमा एनथेक्सको लक्षण देखिएको आंशकापछि पशु चिकित्सकको टोलीले चौपायाको पोष्टमार्टम नगरी खाल्डो खनी पुरेको आरक्ष कार्यालयले जनाएको छ ।
एन्थ्रेक्स नामक रोग मानिसमा समेत सर्न सक्ने भएकाले पोष्टमार्टम नगरिए केही चौपायाको रगतको नमूना परीक्षण मात्र गरिएको पशु प्राविधिक कोइरालाले बताए ।कोइरालाका अनुसार मरेका चौपाया मध्ये केहीमा चरचरे र भ्यागुते रोगको समेत लक्षण देखा परेको छ । कोशी टप्पु वन्य जन्तु आरक्षका रेञ्जर सुमन काफ्लेका अनुसार आरक्ष भित्रको घाँसे मैदान भएको १ किलोमिटरको क्षेत्रभित्र ४४ चौपाया मरेका भेटिएका छन । मर्नुको कारण भने ल्यावको रिपोर्टपश्चात मात्र यकिन हुने आरक्ष कार्यालयले जनाएको छ । आरक्षमा यति धेरै पशु चौपाया मरेको यो पहिलो घटना हो ।